Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi njem Russia » Citizensmụ amaala Russia 3.1 amachibidoro ịhapụ Russia maka ụgwọ akwụghị ụgwọ
N’agbata Jenụwarị na Machị 2021, ndị na-agbapụta mgbapụta nyere iwu karịrị nde 3.1 na-egbochi ndị ji ụgwọ ịpụ na Russia
Enwere ike ịmachibido iwu njem mgbe ụgwọ mmadụ gafere 30,000 rubles ($ 406)
A machibidoro ndị ji ụgwọ nkwado ụmụaka ịhapụ mba ha mgbe ụgwọ ha karịrị 10,000 rubles ($ 135)
Onu ogugu ndi amaala nke nde 3.8 rusiri ike na mbido afọ
Dị ka Russia si Balọ Ọrụ Federal Bailiffs, a machibidoro ihe karịrị nde ụmụ amaala atọ nke Russia ịhapụ mba ha n'ihi ụgwọ ha ji ụgwọ.
Federal Bailiffs Service na-ekwu na mmachibido njem na-abụkarị ndị nwere nkwado nwa, mgbazinye ego na ụgwọ ọrụ. Anakọtara ihe karịrị ijeri ruble 120 (ijeri $ 1.6) n'aka ndị ji ụgwọ dị otú ahụ n'afọ gara aga.
Ihe data dị ugbu a na-egosi na n’agbata Jenụwarị na Machị 2021, ndị na-agbapụta ego ewepụtara ihe karịrị nde 3.1 igbochi ndị ji ụgwọ ịhapụ Russia. Ihe ruru 225,000 n'ime mkpebi ndị a metụtara ịkwụ ụgwọ maka ịkwado ụmụaka. Ihe karịrị ijeri rubles itoolu ($ 122 nde) anakọtara site n'aka ndị ji ụgwọ na ọnwa atọ. Ọnụ ọgụgụ nke nde mmadụ 3.8 chere ihu na mmachi njem na mbido afọ.
Na Russia, ndị na-agbapụta ume nwere ikike ịmachibido iwu njem mgbe ụgwọ mmadụ karịrị 30,000 rubles ($ 406). Enwere ike igbochi ndị na-agbachitere ịkwụ ụgwọ nkwado ụmụaka ịhapụ mba ahụ ozugbo ụgwọ ha karịrị 10,000 rubles ($ 135).